पुन्य कार्की | मझेरी डट कम
editor — Fri, 09/11/2020 - 05:46
एकजना नेताजी नारी सभामा कस्सिई कस्सिई भाषण गरेको सुनेँ– “नारी जाति उठ्नुपर्छ । नारी जाति जुटनुपर्छ । यो देशमा रामराज्य ल्याउनुपर्छ । अबको समाज नारीको निम्ति रामराज्य बन्नुपर्छ । नारीहरुले कति उत्पिडन सहेर बस्ने ? नारी जातिले कहिलेसम्म अपमान र अवहेलना सहने ? अब नारीहरू साँच्चै जाग्नुपर्छ र समस्त महिलाको रामराज्य स्थापना गर्नुपर्छ ।” मैले उनका एकध भाषण अन्य सभा समारोहमा पनि सुन्ने मौका पाएको छु । उनी यस समाजका एक राजनीतिक प्राणी हुन । सबैले उनलाई एक प्रबुद्ध अध्ययनशील व्यक्तिको श्रेणीमा राख्दछन् । कतिले त उनलाई सुझबुझपूर्ण व्यक्तिको रुपमा भारी प्रंशसा पनि गर्दछन् ।
editor — Tue, 11/19/2019 - 18:12
एकचोटी मावली घर जाँदा एउटा किताब देखेछन् । किताबका अक्षरहरू हेरे, अनि उनी ग्वाँ ग्वाँ रुन थाले । उनको रुवाइदेखि सबै आश्चर्यचकित भए, उनलाई फकाएर सोधियो, "बाबु किताबको अक्षर हेरेर किन रोएको ?" उनले जवाफ दिएछन्, "मेरो त्यति मोटो ‘क’ दुब्लाएछ । त्यसको माया लागेर रोएको ।"
हिन्दी साहित्य जगतका प्रेमचन्दको नाम यस लहरमा राख्न सकिन्छ । हिन्दी साहित्यमा प्रेमचन्दले दिएको योगदानलाई चानचुने आँक्न मिल्दैन ।
कविता र रक्सीमा डुब्ने वोदलेर
editor — Sat, 10/05/2019 - 10:36
नेपाली साहित्यमा हरिभक्त कटुवालको जीवनसँग ठ्याक्कै मिल्ने वोदलेरको जीवन पनि रक्सीसँग मितेरी गाँसेरै बित्यो । संसारका कतिपय स्रष्टाहरूको जीवनमा अनौठा–अनौठा तादाम्यताहरू गाँसिएको पाउँछौँ । चाहे भारतीय कवि गोरख पाण्डेको आत्महत्या होस् या नेपाली भैरव अर्यालको आत्महत्या होस् या मायाकोब्स्कीको आत्महत्या होस् ।
अर्को अनौठो साम्यता अमेरीकी स्रष्टा एडगर एलेन पो र वोदलेरको जीवनमा पनि भेट्टाउन सक्छौँ ।
editor — Sun, 03/17/2019 - 05:31
भनिन्छ : अमेरिकी राष्ट्रपति जोन.एफ. केनेडीले प्रयोग गरेको भनाइ– “यो नसोध कि तिम्रो देश तिम्रा लागि के गर्न सक्छ, आफैँलाई सोध कि तिमी आफ्नो देशको लागि के गर्न सक्छौ” उनको थिएन, यो त महान् स्रष्टा खलिल जीव्रानको थियो । उनी साँचो अर्थमा एक मनमौजी फकिर स्रष्टा थिए । सन् १८८३मा लेवनानमा जन्मेका खलिलको जीवनमा एकपछि अर्को दुर्भाग्यको ओइरो लाग्यो ।
editor — Thu, 11/16/2017 - 04:40
मान्छे कुनै न कुनै रुपको उचाइमा बस्न मन पराउँछ । सायद आदिम युगमा पनि भुइँ छोडी रुख चढेर बस्ने चेतना, उचाइमा बस्ने चाहनाबाट निसृत भएको हुँदो हो । पछि घर बनाएर बस्नथालेपछि पनि भूइँघरभन्दा टाँढेघर तर्फको रुचि बढ्नुमा पनि उचाइमा रहने आकाँक्षाबाट प्रेरित भएको हुँदो हो । उचाइका तरेलीहरू किसिमकिसिमका छन् । कोही घरको उचाइमा बस्न खुशी हुन्छन् । कोही पदको उचाइमा बस्न खुशी हुन्छन् । कोही प्रतिष्ठाको उचाइमा बस्न खुशी हुन्छन् । कोही समृद्ध चेतनाको उचाइमा बस्न खुशी बन्छन् ।
आमा आशिक दिन कन्जुस नगर
आज राति सपनीमा
आफूभित्रै पीडा बोकी बाचेको छ मान्छे
सुख छैन जस्तो लाग्छ मेरो बिचार मा
मेरो मुटु भएर
पावनि जुडशितलक संक्षिप्त परिचय
मर्नै परे मरिदिउँला
क्वालालम्पुरमा वेतिनीको सपना
मै शहर मे घुमथौ (थारू भाषाको गजल)
अन्तर्राष्ट्रिय कविता दिवस् अर्थात मार्च २१